About Us - Dongguan Comming milina Co., Ltd.
Dongguan Comming milina Company vola ny Bmax iraisam-pirenena avy any Dongguan tanàna, izay an'i maturest faritra-perla riverdelta Shina, ary koa mikatona ho Songshan Lake (Ecology faritra), izay belongshigh & vaovao-teknolojia faritra panjakana haavon'ny amin'ny tanteraka orinasa rojo rafitra toy ny koa ny rivo-piainana mafy ny zava-baovao; amin'ny heviny ny fotoana, ny orinasa ihany koa ny mponina tao amin'ny lalantsara volamena eo Guangzhou sy Shenzhen, monja 1 ora lamasinina avy any Hong Kong sy ny antsasaky ny ora F Rom Guangzhou ho an'ny orinasa mivantana; amin'ny tanjona isika provideefficiently sela manova fo milina mandeha ho azy sy ny peripherial mifandraika fonosana milina.
Isika hitandrina humanized fitantanana toy ny olombelona fitsipika foana nanomboka nanorina, dia maharitra fa ny fahombiazana amin'ny expe rienced zava-baovao sy mifantoka amin'y fomba, foana matoky Azo Itokisana Q uality + Humanized fandidiana + Maintaince fotsiny toy ny planina fitsipika, weare Natao nankasitraka sy ny fandraisana ho mpikambana avy amin'ny mpanjifa avy rehetra amin'izao tontolo izao toy ny amercian avaratra, Atsimo Amercian, Middleeast, Azia, ary tsy ela, dia efa ny fahazoan-dalana manokana fanondranana voasoratra anarana avy amin'ny governemanta Shinoa sy ny succes Sed nekena kalitao rafitra fitantanana ny ISO9001: 2008
Isika manokana samihafa sela fanovana milina ary koa ny mitovy peripherial packi de milina toy ny kabine horonan-taratasy rewinding milina, Mini Jumbo conwinding milina, lakozia lamba famaohana conw inding amin'ny lamination teknolojia, napkin andian-dahatsoratra (anisan'izany ny fanontam-pirinty sy ny lamination), aforitra lamba famaohana taratasy (Lamination) sy ny sisa ! isika dia azo antoka fa afaka mandresy izany ny tsena amin'ny alalan'ny All-manodidina & ny ota cerely fiaraha-miasa.
Address: 3th faritra indostrialy, xiasha tanàna, shipai tanàna, Dongguan tanàna, faritanin'i Guangdong, prc
Phone: + 86-76989276222 (30 andalana)
mandray ny hifandray aminay raha misy fanadihadiana, ny tarika rehetra dia ho hita aminao amin'ny 24 ora